မြန်မာTamwe, YANGON ရှိ Nandar Beauty & Body Spa | Drecome
Nandar Beauty & Body Spa | Tamwe, YANGON.
Massage Sauna | Spa | Hair Saloon | Light Plastic Surgery Epilation | Beauty Others
အနီးအနား Kyauk Myaung Zay မှတ်တိုင်5မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်
Spa ကောင်းကောင်း တခုမှာ အနားယူချင် ပါသလား? ဒါဆိုရင်တော့ Nanda Beauty and Body Spa နဲ့ မိတ်ဆက် ပေးပါရစေ။ Nandar Spa ကတော့ ပျုိမေ တို့အတွက် အကောင်းဆုံး Spa တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်ကတော့ အမှတ်-၂၇၊ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေ မြို့နယ် မှာ တည်ရှိပြီး ဆိုင်ဖွင့်ချိန် ကိုတော့ နေ့စဉ် မနက် ၉ နာရီ မှ ည ၉ နာရီ အထိ ဖွင့်လှစ် ပေးထားပြီး လပြည့်နေ့ တစ်ရက်တော့ ဆိုင်ပိတ်ပါသည်။
ဆုိုင် အပြင်အဆင် က ခေတ်မှီ လှပ ပြီး၊ တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်သော ပတ်ဝန်းကျင်၊ နွေးထွေး ပြီး သက်တောင့် သက်သာ ရှိသော နေရာ ထိုင်ခင်း များ နှင့် ဆိုင်ရှိ ဆက်တင် အားလုံးကို ခေတ်မှီ လှပစွာ ပြင်ဆင် ပေး ထားပါသည်။
Nandar Beauty and Body Spa မှာ ရရှိနိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှု တွေကတော့ မျက်နှာ အသားအရည်ကို ချွေးပေါက်ထဲ အထိ သန့်စင်ပေးခြင်း နှင့် သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းစေရန် နှိပ်နယ် ပေးခြင်း၊ဆားဝက်ခြံ အဆီဖု များ ဖယ်ရှားပေးခြင်း၊ မျက်နှာ အသားရည် လိုအပ်ချက်အရ Mask ကပ်ပေးခြင်း၊ scrub၊ moistarizer၊ mask and shower with steam၊ body massage and oil massage တို့ကို စေတနာ အပြည့်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု ပေးထားပါတယ်။ ဒါအပြင် Nandar Spa မှာဆိုရင် နာမည်ကျော် Decleor beauty product ကိုသုံးပေးထားလို့ ပျိုမေ တို့အတွက် အသားအရည် ဖြူဝင်း ချောမွေ့ ပြီး နတ်သမီး လေးလို လှပကာ၊ စ်ိတ်ကျေနှပ် မှု ကိုရရှိစေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Nandar Spa မှာ ဆိုရင် အတွေ့ကြုံရင့်ကျက်သော ဝန်ထမ်းများ ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု၊ စိတ်ရှည် သည်းခံမှု၊ ပွင့်လင်း ဖော်ရွေပြီး စိတ်သဘောထား ပြည့်ဝစွာဖြင့် စနစ်တကျ ဝန်ဆောင်မှု တို့ကတော့ ပျိုမေ တိုင်း နှစ်သက် သဘောကျပြီး ထပ်ကာ ထပ်ကာ သွားချင်နေမဲ့ နေရာလေး ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် Nandar Spa ကို လာရောက် အားပေးသော မိတ်ဟောင်း၊ မိတ်သစ်များ ကို ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သော အနေဖြင့် စက်တင်ဘာလကုန်အထိ အထူး Discount ၃၀ % ထိလျော့ချ ပေးထားလို့ နောက်တခါ မရနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး ကို ရယူရင်း Nandar Spa ကို ကြွရောက်ခဲ့ ဖို့ ဖိတ်ခေါ် လိုက်ပါတယ်။
No.35, Ground floor, Dahma Dana Street, Kyauk Myaung , Tarmwe Township.
No 13, ZaLi La Street, Kyauk Myaung, Tarmwe Township, Yangon
No 30, Ground floor, Zatila Street, Tarmwe Township,Yangon